အမေရိကန် Boston အခြေစိုက် The World ရေဒီယို ၏ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ‌နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်နှင့် မေးမြန်းခန်း – BNN
အမေရိကန် Boston အခြေစိုက် The World ရေဒီယို ၏ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ‌နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်နှင့် မေးမြန်းခန်း
The World: Minister, when you speak to US officials, what reasons do they give for not accepting your government?
အမေရိကန် အရာရှိကြီးတွေ ပြောဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း ဝန်ကြီးရဲ့ အစိုးရကို ခုထိ အသိအမှတ်မပြု နိုင်သေးတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အကြောင်းပြချက် တွေများ ပေးကြပါသလဲ။
Zin Mar Aung: Their diplomatic reasoning is “We’ll engage with the state, not necessarily its government.” But even if the US government doesn’t recognize us officially as the government of Myanmar — at least not yet — they do recognize our struggle to restore democracy. I must admit, their position is not very clear. But they acknowledge our efforts.
သူတို့သံတမန်ရေးဖက်က အကြောင်းပြတာကတော့ လက်ရှိမှာ နိုင်ငံအနေနဲ့ပဲ ဆက်ဆံမယ် အစိုးရအနေနဲ့ ဆက်ဆံနေစရာ မလိုသေးဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ကို အမေရိကန်က အခုထိ တရားဝင် အသိအမှတ်မပြုသေးပေမယ့် ကျမတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ရုန်းကန်နေမှုကိုတော့ သူတို့ အသိအမှတ် ပြုထားပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်က သိပ်တော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိသေးဖူးလို့တော့ ဝန်ခံပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားစိုက်မှုတွေကိုတော့ သူတို့ အသိအမှတ်ပြုတယ်။
If you received official recognition from the US, how would that help your revolution?
အမေရိကန် ကနေ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုမယ် ဆိုရင်ကော ခင်ဗျားတို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးကို ဘယ်လို ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေ ဖြစ်လာမယ်ထင်လို့လဲ။
Official recognition will bring benefits that go beyond moral support. We could get real help — like humanitarian assistance. And real funding. It would give us access to the roughly $1 billion that has been frozen in the US. That could bring us closer toaturning point in the revolution.
တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုမယ်ဆိုရင် စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ ထောက်ခံအားပေးနေတာထက် ပို အကျိုးရှိလာနိုင်တာပေါ့။ အကူအညီအစစ်အမှန်တွေ ရနိုင်လာတာပေါ့။ ဥပမာ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားတဲ့ အကူအညီ‌ပေးတာမျိုးတွေအတွက် ရံပုံငွေတွေရလာမယ်။ အမေရိကန်မှာ ထိန်းချုပ်ခံနေရတဲ့ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံနီးပါးကိုလည်း ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ခွင့် ရလာမယ်။ တော်လှန်ရေးကြီးအတွက် အလှည့်အပြောင်းကြီးနဲ့ ပိုပြီး နီးစပ်လာနိုင်တာပေ့ါ။
I’m glad you brought up the $1 billion in the Federal Reserve. Would that beareal game-changer for you? What would you do with that money?
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ကနေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ကိစ္စ ပြောပြလို့ ကျွန်တော် ဝမ်းသာမိပါတယ်၊ အဲဒါက တကယ်ပဲ ဒီတော်လှန်ရေးအတွက် အလှည့်အပြောင်းကြီး ဖြစ်လာနိုင်သလား၊ အဲ့ဒီ ငွေတွေ ရရင် ဘာတွေ လုပ်မှာလဲ။
Our revolution has gotten zero funding from any other country. None. Only the public is supporting us as we forge ahead. Not just in terms of war but with strikes and demonstrations. Maybe you’ve seen that we sell government bonds now. The Myanmar diaspora across the world has raised millions of dollars so we can provide real services on the ground and finance the revolution. Look, people in Myanmar have to set up their very own defense forces to fight the military, which is slowly killing them. But if we access that billion dollars, we’ll be able to really provide more humanitarian assistance — and logistics for the defense forces.
ကျမတို့ တော်လှန်ရေးအတွက် ဘယ်နိုင်ငံဆီကမှ ခုထိ တပြားတချပ် မရခဲ့ပါဘူး။ လုံး၀ပါပဲ။ ပြည်သူ‌တွေက ထောက်ပံ့ပေးနေလို့ ရှေဆက်လှုပ်ရှားနိုင်တာပါ၊ ဒီနေရာမှာ စစ်တိုက်ဖို့တင်မရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ သပိတ်တိုက်ပွဲ‌တွေ အတွက်လည်း မရပါဘူး။ ကျမတို့ အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်တွေ ရောင်းနေရတာ သိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေဆီက ဒေါ်လာ သန်းချီပြီး စုဆောင်းနေရတာပါ။ ဒါတွေနဲ့ မြေပြင်မှာ တကယ့်အကျိူးပြု လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးပေးရတယ်။ တော်လှန်ရေးအတွက် ရံပုံငွေ ဖြည့်ဆီးပေးနေရတာပါ။ စစ်တပ်ကို တိုက်ဖို့ ကျမတို့ မြန်မာပြည်သူ‌တွေကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင် ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ ထားတာကြည့်လိုက်ပါ။ စစ်တပ်ကို အမှဲ့ချွေ သတ်ဖြတ်နေနိုင်ပါပြီ။ ကျမတို့သာ ဘီလီယံ နဲ့ ချီတဲ့ ဒေါ်လာတွေ ရနိုင်မယ်ဆိုရင် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတဲ့ အကူအညီ‌တွေ ပိုပေးနိုင်မယ်။ ကျမတို့ တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့တွေ အများကြီး ပေးနိုင်မှာပါ။
Some of the revolutionary fighters on your side are asking fora“no-fly zone.” Outside forces actually shooting down fighter jets over Myanmar. What do you think of this idea?
တော်လှန်ရေး လက်နက်ကိုင်တချို့က No-Fly zone တောင်းဆိုနေတယ်။ (တောင်းဆိုချက်အတိုင်းဆိုရင် ) ပြင်ပ နိုင်ငံတပ်တွေက မြန်မာမြေပေါ်မှာ ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကို ပစ်ချရတော့မယ်၊ အဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုယူဆပါသလဲ”
This idea comes from the fact that the terrorist military uses air strikes to target our ground forces. It’s clear they can’t win by fighting on the ground. So, they launch indiscriminate attacks from the air. They hit civilians. And medical facilities and schools and religious sites. They’ll bomb villages and hit women, children and elderly people. This is why many on our side talk aboutano-fly zone. The air force is the terrorist military’s only advantage. Without air support, their troops can’t win against our revolutionary fighters.
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လေကြောင်းကနေ ကျမတို့ရဲ့ မြေပြင်က တပ်တွေကို တိုက်ခိုက်လာလို့ အဲ့လို တောင်းဆိုလာရတာပါ။ သူတို့ မြေပြင်မှာ နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သိသာထင် ရှားပါတယ်။ လေကြောင်းကနေ ရမ်းသမ်းပစ်တော့ အရပ်သားတွေ ထိမှန်တယ်။ ဆေးရုံတွေ၊ စာသင်ကျောင်း‌တွေ၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံတွေပါ ထိမှန်တယ်။ ရွာတွေကိုပါ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်လာတော့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါ ထိမှန်ကုန်တယ်၊ အဲဒါကြောင့် ကျမတို့ဖက်က no-fly zone ကို တောင်းဆိုလာကြတာပါ၊ အကြမ်းဖက် စစ်တပ်က ကျမတို့ အပေါ် အသာစီးရတာဆိုလို့ လေတပ်ပဲရှိပါတယ်။ လေတပ် အကူအညီမပါပဲနဲ့ ကျမတို့ တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေကို သူတို့ နိုင်အောင် မတိုက်နိုင်ပါဘူး။
You are pretty well known for activism. You’ve met Hillary Clinton and Michelle Obama. Are any famous political figures helping you out behind the scenes?
ခင်ဗျားဟာ မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ လူသိများသူပါ။ ဟီလာရီ ကလင်တန်၊ မီချယ်လ် အိုဘားမား တို့နဲ့ ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ကွယ်ကနေ အကူအညီပေးနေတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ရှိလား။
To be open with you, I get some moral support. But there’s really no one like that helping us behind the scenes.
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ပိုင်းတွေမှာ အထောက်အကူတွေ ရခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်ကနေ တကယ်ကူညီပေးနေသူ မရှိပါဘူး။
Everyone is focused on Ukraine right now. But your country has something in common with Ukraine. Russia sells weapons to the Myanmar junta. So does China. What is your message to countries that provide weapons to your enemies?
အခုဆို လူတိုင်းက ယူကရိန်းကို အာရုံစိုက်နေကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံလည်း ယူကရိန်းနဲ့ ဆင်တူနေတာတွေ ရှိနေတယ်၊ ရုရှားက မြန်မာစစ်တပ်ကို လက်နက်ရောင်းနေသလို တရုတ်ကလည်း ရောင်းပေးနေတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရန်သူတွေ (စစ်တပ်)ကို လက်နက်တွေ ထောက်ပံ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ နိုင်ငံ‌တွေကို ဘယ်လို ပြောချင်လဲ။
We’ve requestedatotal arms embargo from the UN. And from individual countries, too. There are many countries selling weapons to the military. My message to them is very clear: You are part of the killing. You’re part of every civilian life that is taken away.
လက်နက် ရောင်းချနေတာတွေ လုံးဝ ပိတ်ပင်ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂကို ကျမတို့ တောင်းဆိုနေတာပါပဲ။ နိုင်ငံ တခုချင်းစီကိုလည်း အခုလို တောင်းဆိုထားပြီးပါပြီ။ စစ်တပ်ကို လက်နက်ရောင်းပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ သူတို့အားလုံးကို ပြောလိုတာကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ၊ ရှင်တို့အားလုံးဟာ အခုလို စစ်တပ်ကနေ သတ်ဖြတ်နေမှုတွေမှာ ကြံရာပါတွေဖြစ်နေပြီ။ စစ်တပ်က သတ်ဖြတ်တာခံရတဲ့ ပြည်သူတဦးချင်းစီရဲ့ အသက်တွေအတွက် ရှင်တို့မှာလည်း ကြံရာပါအဖြစ် တာဝန်ရှိနေတယ် ဆိုတာပါပဲ။
What type of relationship does the National Unity Government want with China?
တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေးကရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
We seek engagement with China but they seem very prudent. Our message to China has been clear: democracy in Myanmar is notathreat to China. It’sabenefit to China. Democracy will mean we are stable. And able to offer sustainable investment. The coup has only made Chinese investors less interested in Myanmar. To be clear: for this revolution, we’re not requesting Chinese help. We just ask China to not support the terrorist junta and not legitimize them.
တရုတ်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်၊ တရုတ်ဖက်က အတော်လေးကို ချင့်ချိန်နေတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ကျမတို့ဖက်က တရုတ်ကို ပေးတဲ့ သတင်းစကားကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ၊ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ ရှိတာဟာ တရုတ်အတွက် ခြိမ်းချောက်မှု မဟုတ်ဘူး။ တရုတ်အတွက် အကျိုးရှိမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီရှိရင် နိူင်ငံလည်း တည်ငြိမ်လာမယ်၊ တရုတ်အတွက် ရေရှည် အကျိုးအမြတ်ရှိမယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ကျမတို့ ကမ်းလှမ်းနိုင်မယ်။ အခု အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် တရုတ်က ရင်းနှီးမြုပ်နှံမယ့် လူတွေက မြန်မာပြည်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းလာပြီ။ ဒီနေရာမှာ ရှင်းအောင်ပြောချင်တာက ကျမတို့ တော်လှန်ရေး အတွက် တရုတ်ဆီက အကူအညီ တောင်းနေဝာာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အကြမ်းဖက် စစ်အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို မထောက်ခံဖို့နဲ့ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုတာမလုပ်ဖို့ပဲ ပြောနေတာပါ။
Imagine your side wins this civil war. Tell me about the new Myanmar you would try to create.
ခင်ဗျားတို့ အခု ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမှာ အနိုင်ရသွားပြီ ဆိုကြပါစို့၊ ဘယ်လိုမျိုး မြန်မာပြည်သစ်ကို ဖန်တီးကြမယ် စိတ်ကူးထားလဲ။
We believe our democratic forces will remove this military from power. We’ll rebuild the nation and startanew chapter. We will extract the military from the political sphere. And we’ll resolve the problems of ethnic inequality and ethnic self-determination. We have something called the Federal Democracy Charter. It’s our road map for rebuilding Myanmar after the revolution. We want to avoidapolitical vacuum. Armed groups, people who have led strikes against the regime, parliamentarians — we will come together and transition intoafederal democracy. That’s our open door toafuture Myanmar.
ကျမတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ စစ်တပ်ကိုလည်း နိုင်ငံရေးကနေ ဆွဲထုတ်ပစ်ပါမယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ အကြားက မညီမျှမှု ပြဿနာတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ခွင့်အရေးတွေကို ဖြေရှင်းပေးမယ်။ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ကျမတို့မှာ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်စာတမ်း ရှိနေပါပြီ၊ ဒါဟာ တော်လှန်ရေးကြီးအနိုင်ရ ပြီးသွားရင် ပြန်လည်တည်ဆောက်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံတော် အသစ်အတွက် ကျမတို့ရဲ့လမ်းပြမြေပုံပါပဲ။ တော်လှန်ရေး ပြီးတာနဲ့ နိုင်ငံရေးလေဟာနယ်လို ဖြစ်ကျန်ခဲ့တာမျိုး မဖြစ်ဖို့ စစ်တပ်ကို လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေ၊ သပိတ်အဖွဲ့တွေ၊ လွှတ်တော် အမတ်တွေ အတူပူးပေါင်းပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ဖေါ်ဆောင်ကြမှာပါ၊ ဒါဟာ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်ရောက် တည်ဆောက်ကြဖို့ အတွက် ကျမတို့ ဖွင့်ပေးထားတဲ့ တံခါးပါပဲ။
Minister, what else would you like to add?
ဝန်ကြီးအနေနဲ့ အခြားဘာများ ဖြည့်စွက် ပြောချင်ပါသေးလဲ။
I’d like to makeacomment about Ukraine and Russia. When you haveabig powerful nation using military might to invadeasovereign nation, naturally that grabs the world’s attention. In Myanmar, weapons are also used to attack, torture and persecute civilians — all the way up to our president, who is in prison. But we notice how the world’s response differs. You know, International Women’s Day is happening [March 8] and we all know about domestic violence and the need to help people who are hurt inadomestic environment. Other countries hesitate to support us because they think, unlike Ukraine, Myanmar’s problem is “domestic.” But don’t we deserve the same consideration? We are victims of domestic violence. Countries should takeastand and say, no, we won’t let them be victimized any longer.
ယူကရိန်းနဲ့ ရုရှားအကြောင်း ကျမ မှတ်ချက် ပေးလိုပါတယ်၊ အင်အားကြီးနိုင်ငံတခုက စစ်အင်အားသုံးပြီး အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံတခုကို ကျုးကျော်တဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာရဲ့ အာရုံစိုက်မှုခံရတာ သဘာဝပါပဲ၊ မြန်မာနိူင်ငံမှာလည်း လက်နက်ကို သုံးပြီး အရပ်သားတွေကို တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ် နှိပ်စက်တာတွေ လုပ်နေတာပါ။ အခု အကျဉ်းထောင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ သမ္မတကြီးပါ ခံနေရတာပါ။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ရှုမြင်ပုံ ဘယ်လိုကွာခြားနေလဲဆိုတာကို ကျမတို့ သတိပြုမိပါတယ်၊
မတ်လ ၈ ရက်နေ့ဟာ နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာ ရှင် သိမှာပါ။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ကူညီဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ကျမတို့အားလုံးသိထားလို့ပဲလေ။ တချို့နိုင်ငံတွေက မြန်မာပြဿနာဟာ ယူကရိန်းလို မဟုတ်ပဲ “ ပြည်တွင်းရေး” ကိစ္စလို့ ယူဆပြီး ကျမတို့ကို ထောက်ခံဖို့ တွန့်ဆုတ်နေကြပါတယ်။ ကျမတို့ကို (အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရသူတွေအဖြစ်) အတူတူ သဘောထား မထိုက်ပေဖူးလား၊ တကယ်က ကျမတို့ဟာ ပြည်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုဒဏ် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ကို ခံနေကြရသူတွေပဲလေ။ နိုင်ငံ‌တွေကသာ အဲဒီလိုတွေးမိပြီး အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကို လက်မခံဘူး လို့ ရပ်တည်လာကြမယ်ဆိုရင် ကျမတို့တတွေ နောက်ထပ် အကြမ်းဖက်ခံကြရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(အမေရိကန် Boston အခြေစိုက် The World ရေဒီယို ၏ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ‌နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် ဒေါ်ဇင်မာအောင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း ဖြစ်သည်။)
ရုရှားအစိုးရ ဘာတွေ ပြောနေလဲ
တရုတ်အစိုးရက ပူတင်ကို ကျောခိုင်းတော့မှာလား